जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रमुख एवम् एस.पी. अरूण बी.सी. ले आचार्यलाई हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दा चलाइने बताएका छन् । नयाँ दिल्ली जाने तयारीमा रहेका आचार्य सोमबार काठमाडौँबाट पक्राउ परेका थिए । सुनसरी बराह नगरपालिका–६ चक्रघट्टीस्थित लक्ष्मी आश्रममा बस्दै आएका २४ वर्षीय आचार्यमाथि २५ चैत गते गोली प्रहार भएको थियो ।
हिन्दू राज्यको माग गर्दै गरेको आन्दोलन सफल नभएपछि आचार्यले धार्मिक हिंसा भड्काउन र जनता र धर्मगुरुलाई आन्दोलनका लागि उक्साउन आफूलाई गोली हान्ने योजना बनाएका थिए । गत चैत २५ गते विराटनगरको जतुवामा बिहान २ बजेतिर शौच गर्न निस्किएका बेला अज्ञात समूहले गोली हानेर आचार्यलाई घाइते बनाएको भनेर हल्ला फैलाइएको थियो । तर घटनास्थलमा भने ‘मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन आर्मी’ नामक भूमिगत समूहको पर्चा छरिएको थियो । प्रहरीका अनुसार आचार्यले हातमा गोली हान्न भनेका थिए तर गल्तीले छातीमा लागेको हो । अभियुक्त माधव चौधरीले पूर्व योजना अनुसार आफूले पाँच मिटर टाढाबाट गोली प्रहार गरेको तर निशाना चुकेपछि दाहिने कुम छेउमा लाग्न गएको बताए । चितवनमा नै गोली प्रहार गर्ने प्रपञ्च रचिएको भए पनि हतियार व्यवस्थापन नहुँदा सफल नभएको पाइएको छ ।
आचार्यका गतिविधि यस अघि पनि शङ्कास्पद थियो । केही समय अघि सुनसरीमा भएको हिन्दूवादीको प्रदर्शनमा आचार्यकै अगुवाइमा भा.रु. बाँडिएको थियो । यस अघि उनले संविधान बनेको एक साताभित्र देशभरका चर्चहरूमा धावा बोल्ने धम्की दिएका थिए ।